Kusolwa uMampintsha ngokugila uDanger
KUSOLWA uMampintsha njengembangela yokuthi iBig NUZ igcine inganandisanga kwiFact Durban Rocks yakamuva
NQOBILE MASIMULA | January 7, 2020
UMAMPINTSHA uphinde wagila uzakwabo weBig NUZ emva kokumncisha ithuba lokunandisa phambi kwezinkumbi zabantu emcimbini wokuvala unyaka, iFact Durban Rocks #Fact18.
UMampintsha uvele wakhetha ukulandela isinqandamathe sakhe, uBabes Wodumo, kunokuthi alinde baze bangene esteji beyiBig NUZ.
Kuthiwa uDanger, asebesele bobabili noMampintsha kuleli qembu, ubezimisele ngaleli thuba kodwa lashabalala kanjalo ngoba uMampintsha ufike sekwedlule isikhathi obekumele bangene ngaso esteji.
Ngokomthombo waleli phephandaba owawukhona emcimbini, uMampintsha ubesefuna ukufakwa esikhaleni sabanye abaculi emuva kokufika sekwedlule isikhathi.
“Kunokuthi alinde kuvele ithuba, ubefuna ukufakwa esikhaleni sabanye abaculi. Ngesikhathi kungenzeki lokho, wakhetha ukuhamba ngoba ethi kukhona lapho beyocula khona noBabes wakhe,” usho kanje umthombo.
Ngesikhathi kuthintwa uTira, ongumhleli womcimbi futhi ongumphathi weBig NUZ, uthe imbangela yokungangeni esteji kwaleli qembu kube yinkinga yesikhathi.
“Badlulwa yisikhathi sabo okwakumele bangene ngaso esteji. Ngokohlelo lomcimbi kwakumele kungene uSamthing Soweto emuva kwabo. Akulula-ke ukuhliphiza uhlelo ngoba kusuke kuyizikhathi ezisuke zikade zahlelelwa,” kuchaza uTira.
Uveze ukuthi uDanger bahlala naye kwaze kwasa kodwa uMampintsha benoBabes Wodumo bakhetha ukuhamba ngoba bethi kukhona lapho beyonandisa khona.
“Sengathi umuntu kumele ayeke ukuzihlanyisa ngoba kusobala ukuthi uMampintsha akasazimisele ngeBig NUZ, ikakhulukazi njengoba ebhizi ephusha iMampintsha Live DVD, kusho kona ukuthi unezinhlelo zakhe,” kubeka uTira.
Ebuzwa ukuthi kuzokwenziwa njani ngenkokhelo abase beyitholile uthe: "Leyo kusamele ixoxwe kahle ngoba iningi kakhulu le mali ukuthi ingavele icwile kanjalo ngoba kayisenzekanga into abebeyikhokhelwa."
UDanger uthe badlulwa yisikhathi bangabe besakwazi ukungena esteji.
Mayelana nezinsolo zokuthi ukuhamba kukaMampintsha okwadala bangaculi, uthe akanakuphawula kulokho futhi “ukugxambukela ezindabeni zabantu akakukhonzile”.
Imizamo yokuxhumana nemenja kaBabes Wodumo, uNondumiso Simelane, kayiphumelelanga, ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa.